I-china ceramic dehydifying components, ipleyiti yokwenza, ipleyiti yokuhambisa amanzi, ibhokisi yebhokisi yokutsala kunye nabathengisi YUNFENG
izinto ceramic dehydrating, ukwakha ipleyiti, ipleyiti dewatering, ibhokisi sokufunxa
Isingeniso seYunfeng seMveliso: Zonke iipaneli zeceramic ukumelana nokuchaneka, ukungqinelani okuphantsi, i-ultrahigh yesisindo se-polyethylene yeglasi yefayibha eqinisiweyo yomgangatho weplastiki, amandla aphezulu angenasiphelo sentsimbi, ubomi benkonzo ende. Isilinganisi se-Asingle, umthungo ophindwe kabini, iislayiti ezintathu, njl. Isihlalo sinokujikeleza ukufakwa kweedigri ezingama-360 ukwamkelwa, ukuhlangabezana nemfuno yendawo yokufaka eyahlukileyo. Intshayelelo yeMveliso yeYunfeng: ngokweemfuno zabathengi, sinegumbi elinye, igumbi eliphindwe kabini ...
Intshayelelo yeMveliso yeYunfeng:
Zonke iipaneli zecaramic ukumelana ne-abrasion elungileyo, ukungavisisani okuphantsi, i-ultrahigh ye-molecular polyethylene yeglasi yefayibha eqinisiweyo yomgangatho weplastikhi, amandla aphezulu angenasiphelo sentsimbi, ubomi benkonzo ende. Ukwahlulahlula i-Asingle, umthungo ophindwe kabini, iislayiti ezintathu, njl.
Isihlalo sinokujikeleza ukufakwa kwee-degrees ezingama-360, ukuhlangabezana neemfuno zendawo yokufaka ezahlukeneyo.
Ngokweemfuno zabathengi, sinegumbi elinye, igumbi elinamagumbi amabini igumbi elinye. Uluhlu lwephepha liyi-10-33KPA, ububanzi be-seam ngu-13-20mm, ibhokisi yenziwe ngentsimbi engenasici, ibhokisi ilungelelaniswe ngesanti. Iphaneli yodongwe enxibe kakhulu ukumelana nobomi benkonzo ende.
Izinto (Umphezulu ukuvaleka) I-AL-OXIDE CERAMIC okanye i-ZR-OXIDE CERAMIC okanye i-SI-NITRIDE CERAMIC okanye i-HDPE
Izinto (Iibhokisi zokuntywila) Iinxalenye Stainless
Iimpawu (ukuGubungela umphezulu) 1. UkuGqwesa kwePhepha okuGqwesileyo2. Iphepha elincitshisiweyo elinobuncinci3.Ukuhlala ixesha elide kweZinto zeCeramic ngokwawo
4. Ubomi benkonzo eyandisiweyo kwiMpahla yomatshini (Ukwenza iiWires kunye neeNkcukacha zooPapasho).
5. Umothuko weThermal awuxhathisi Ukuya kuma-600 ° C
Iimpawu (Iibhokisi zokuntywila emanzini) 1. Ilungele onke amaBanga amaPhepha kunye nesantya 2. Owona mgangatho wePhepha3.Drainage efanelekileyo
4.Unciphiso loSetyenziso lwaMandla
1.Ukunxiba okuphezulu kunye neResar Resistance .
Egqithileyo Ucoceko olucinyiweyo lwe-1500-Mid
Okulandelayo: Iindawo ezikhethekileyo zeceramic
Izinto zeCeramic zokuSusa iiMveliso zeBhokisi
I-Ceramic Felt Ibhokisi yokuTsala yeNdawo yokuSebenzisa amanzi kwiPhepha leMill
Ikhava yebhokisi yokufunxa yeCeramic
Iifayile zokuFihla iBhokisi yokuThintela ukuTsala
Ibhokisi ephezulu yokuTsala iCandelo lokuFunxa
Ibhokisi yePhepha lokuTsala uMatshini wePhepha
Oomatshini bePhepha beBhokisi yokuVala ePhakamileyo yeNxalenye yokuTsala
Oomatshini bePhepha beBhokisi yokuVala ePhantsi yeNxalenye yokuTsala
Ibhokisi yokufunxa yoMatshini wePhepha
Ibhodi ye-Uhmwpe yePhepha elenza oomatshini bokuTsala ibhokisi
Umshini Ibhokisi yokufunxa yeCeramic
Umshini weBhokisi yokuCandwa kweCeramic kwiShishini lePhepha
Umshini weBhokisi yokuCandwa kweCeramic kwiPulp